बटन क्यामेरा | इयरपिस, क्यामेरा किन्नुहोस् र जाँचमा धोका दिईएकोमा हेर्नुहोस् - eXamYo.com
यो eXamYo क्याम क्यामेरा बटन तपाइँको मा प्रयोग गर्न उत्तम पूरक हो परीक्षा आफ्नो eXamYo माइक्रो ईयरपीस.
यो एक मात्र हो माइक्रो क्यामेरा विश्वमा जुन तपाईंलाई प्रसारण गर्न अनुमति दिन्छ भिडियो ताररहित वास्तविक समयमा मार्फत वाइफाइ, or जी वा G जी. कुनै केबलहरू छैन, सिम कार्ड छैन, कुनै अतिरिक्त लागत छैन। कुनै उपकरणको साथ उपयुक्त: कम्प्युटर (विन्डोज, म्याक), मोबाईल र ट्याब्लेटहरू (एन्ड्रोइड, आईओएस) र अपराजेय मूल्यमा!
परीक्षामा प्रतिलिपि गर्दै कहिल्यै सजिलो भएको छैन: संग eXamYo क्याम तपाईं आफ्नो छविहरू देखाउन सक्नुहुन्छ परीक्षा तपाइँका सहायकलाई, तिनीहरूलाई हुकुम बिना नै, अन्तिम काट्नु!
eXamYo क्याम बटन क्यामेरा
सबै भन्दा राम्रो परीक्षाको लागि क्यामेरा बजार को।
परीक्षामा प्रतिलिपि गर्नुहोस् पूर्ण सुरक्षा संग, सबैभन्दा सानो बटन क्यामेरा.
स्ट्रिम प्रत्यक्ष भिडियो तपाईंको सहयोगीलाई परीक्षा प्रश्नहरूको साथ दूरी को सीमा बिना.
केवल १००% तार रहित माइक्रो क्यामेरा
पूरा परीक्षा किट, कम्प्युटर, स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटको साथ उपयुक्त।
संग eXamYo क्याम बटन क्यामेरा तिमी सक्छौ कुनै परीक्षा उत्तीर्ण सजिलै!